Nhau - Su Zimeng: michina yekuvaka iri kusuduruka kubva mukuwedzera musika-yakanangana nemitengo yemusika wemasheya uye kukwidziridzwa kwemusika wekuwedzera
Su Zimeng: Mashini yekuvaka iri kusimuka kubva mukuwedzera musika-yakanangana nemusika wekutengesa nekuvandudza musika
Su Zimeng, purezidhendi weChina Construction Machinery Industry Association, akataura pa "Chegumi Zvekuvaka Zvishandiso uye Management Management Innovation Musangano" kuti vacheri ndivo barometer yeiyo michina indasitiri indasitiri. Dzemukati mabhurandi anoverengera anopfuura makumi manomwe kubva muzana emusika wechizvino uno wekuchera. Zvakawanda uye zvakawandisa zvigadzirwa zvemumba zvichave zvakagadzirirwa, uye epamba marangi achave nemabudiro mazhinji mukuvimbika, mukurumari, nekuchengetedza simba uye kudzikisira mweya.
Sekureva kwaSu Zimeng, kutengesa kwemachina ekuvaka nemidziyo gore rino zvasvika pakakwirira mumakore apfuura. Kuwanda kwevatengesi vemarori kwakasvika zviuru makumi mana nezvishanu, uye huwandu hwekutengesa hwevanokambaira vakasvika zvikamu 2,520, uye kudiwa kweanokambaira cranes kwave kushomeka kubvira gore rino. Kusimudza mapuratifomu uye epuratifomu yebasa remuchadenga zvakagadziriswa nekukurumidza mumakore achangopfuura, uye zvinotarisirwa kuti zvigadzirwa izvi zvichave nenzvimbo huru yekuvandudza mumakore mashanu anotevera.
"Zviverengero zvakazara kubva kumapoka emabhizimusi ayo anoshamwaridzwa nesangano anoratidza kuti mari yekutengesa mu2019 yakawedzera ne20% zvichienzaniswa ne2018, uye purofiti yakawedzera ne71.3%." Su Zimeng akadaro. Iyo yakazara data yeakakosha mabhizinesi manhamba inoratidza kuti hwaro hwa2019 Muna 2020, mari yekutengesa yemakambani ekuvaka michina yakawedzera ne23.7%, uye purofiti yakawedzera ne36%.
Kubva pakuona kwetekinoroji yechigadzirwa, makambani mazhinji kuBauma gore rino airatidzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, batch yezvigadzirwa zvine hungwaru zvine basa rekubatsira, kutyaira zvisina kurongwa, sango manejimendi, kuchengetedzwa kwekuchengetedza, mashandiro akasarudzika, kudzora kure, kukanganisa kuongororwa, hupenyu hwekutenderera, nezvimwe. Chigadzirwa chacho chave kushandiswa, zvakagadziriswa zvinetswa mukuvakwa, chakasangana nemidziyo yekushandisa yekuvaka kukuru kweinjiniya, uye ndokubereka batch yeakakwira-magumo enjiniya michina nemidziyo mikuru yehunyanzvi. Su Zimeng akataura kuti iro danho redigitalization, greening, uye izere seti yezvimwe zvigadzirwa zvinoda kuvandudzwa. Mimwe midziyo mikuru-mikuru uye zvikamu zvakakosha nezvikamu zvine kukwana kwemakwikwi pamusika, asi mushure me "14th mashanu-Year Plan", zvigadzirwa zvakawanda zvinosvika kune yepasi rose inotungamira nhanho. .
Tichifunga nezve ramangwana kuvandudzwa kwemuchina wekuvaka kubva pakuona kwechinodiwa dhizaini, Su Zimeng anotenda kuti chekutanga, michina yekuvaka iri kuchinja kubva pamusika unowedzera kuenda kumutsva wemusika wemasheya uye kukwidziridzwa kwemusika wekuwedzera; chechipiri, kubva pakutsvaga mutengo-kugona kusvika kumhando yepamusoro uye kuita kwakanyanya; Imwe chete michina yekuda dhizaini inonyanya kusanganisira dijitari, akangwara, girini, inofadza, akazara maseti, masumbu ebasa, mhinduro dzakajeka, uye akasiyana masisitimu ekuda. Su Zimeng akati nekushandisa kwakakura kwezvinhu zvitsva uye matekinoroji, nharaunda nyowani dzekuvaka dzinosanganisira mabani, kutonhora kwakanyanya nedzimwe nharaunda dzakaisa zvido zvitsva pazvinhu zvekushandisa, zvakasimudzira kuvandudzwa kwetekinoroji yekuvaka, uye zvakare zvakabereka kudiwa kwemidziyo iri kubuda. . Iyi tsika Ichinyanya kujeka, kusanganisira hwaro hwekuvaka hwaro, kuchine kukura kukuru.
Kubva 2020, epamba yekuvaka michini musika kudiwa kwawedzera zvakanyanya, uye yepasi rose musika ekisheni kukosha kwakaratidza kudzikira maitiro. Su Zimeng akati: “Zvinotarisirwa kuti muna 2021, kudiwa kutsva uye kudiwa kwekutsiva mumusika wemuchina wekuvaka zvichaita pamwe chete. Pamwe chete nekuunganidzwa kwemitemo yenyika, indasitiri yemuchina wekuvaka icharamba ichikura zvishoma nezvishoma. ”